#အရှင်ဦးဝီရသူမှ. #အမျိုးသားဒီမီုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို. #ကြိုဆိုပါကြောင်း နှင့် | democracy for burma
tags: အမြိုးသားဒီ မီု, အရှင်ဦးဝီရသူမှ., ကြိုဆိုပါကြောင်း နှင့်, Burma, Myanmar, Myo Yan Naung Thein, NLD, Norway, U Wirathu
← !! #crime #ยะลา #ได้เกิดเหตุ #ระเบิดพื้นที่ #บ้านทุ่งคอก
#အထူးသတင်း>>( ၂၈-၁-၂၀၁၄) #သပ်ိတ်စစ်ကြောင်းများ #ရပ်နားပြီ။ →